Nagu Saabsan - Fujian Foen Aluminum Co., Ltd.
Fujian Foen Aluminum co., Ltd. waxaa la aasaasay 1988, oo ku taal magaalada Fuzhou ee dalka Shiinaha, waxaa ku jira aag dhan 1,333,000 mitir murabac ah oo ay ka badan yihiin 3500 oo shaqaale. 20% iyaga ayaa ah farsamo yaqaanno ama injineero. Waxaan nahay soo-saare xirfad-yaqaan gudaha Shiinaha oo soo saaraysa astaamaha aluminiumka, mashiinnada aluminiumka ah, daaqadda aluminiumka iyo nidaamka albaabka, darbiga daahyada iyo qoryaha qoraxda.
Waxaan nahay guryaha 5 billet foornada tuulada, 1 xarun caaryada, 70 khad shidaal fidin, 4 khadad anodized, 11 khadadka budada toosan, 1 khad xirmooyin budo saf ah, 1 xariijin alwaax xariijineysa iyo 2 khadadka wax soo saarka kuleylka; taas oo ka dhigaysa wax soo saarka sannadkeenna in ka badan 400,000 oo tan.
Waxaan sidoo kale u fidinay CNC-da howlaha iyo mashiinnada aaladda aluminiumka, waxaa ka mid ah goynta saxda ah, qashin-goynta, kubbadda, qodista, nalka router-ka, foorarsiga, weld, iwm. Inta badan qalabka mashiinnada waxaa laga soo dejiyaa Jarmalka, Danmark;
Waxaan ku qanacsanahay inaan soo bandhigno karti sare oo aan leenahay koox xirfadlayaal karti u leh soo saarista, teknolojiyada, maamulka iyo hawlgalka. Dadaalladii sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka gudubnay ISO 9001, ISO 14001 iyo nidaamka maaraynta OHSAS 18001, waxaa lasiiyay cinwaanka caannimada ganacsiga iyo shirkada sumcadda Shiinaha.
Waxaan u heellan nahay raadinta heerka sare ee mabda'a 'ugu sarreeya tayada, Macaamiisha ugu horreeya, adeegga ugu horreeya iyo kan ugu horreeya ee amaahda'. Waa inaan dhisnaa shirkad heerka koowaad ah iyo sumcad caan ah oo leh heer-sare iyo tayo sare.
Hoolka bandhig ee Foen wuxuu muujinayaa adeegyo fara badan oo alaabooyin ah kuwaas oo horumariyay si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisha meelo kala duwan oo juqraafi ahaan iyo qaababka qurxinta. waxaan diirada saareynaa albaabada amaanka ee dhamaadka sare iyo Windows. Oo lagu qalabeeyay shaqo quful caqli gal ah si loo helo nabadgelyo weyn. Iyada oo leh awood farsamo oo xoog leh, tikniyoolajiyad horumarsan oo sifiican loo qalabeysan yahay, cabiraad dhameystiran oo alaabo ah, oo ay ku jiraan Bi-laabyo iyo daaqado, Albaabbo laalaadayo, daaqado alwaax iyo alwaaxyo, Aluminium iyo Glass Louvres, Deedka barkadda, iwm.